चीन स्वचालित क्यापिंग मिसिन निर्माण र कारखाना | शीर्ष
TP-TGXG-200 स्वचालित बोतल क्यापिंग मेशिन बोतलहरुमा टोपीहरु लाई स्वचालित रूपमा पेंच गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। यो व्यापक रूप मा खाना, औषधि, रासायनिक उद्योगहरु र यति मा लागू गरीन्छ। त्यहाँ आकार, सामाग्री, सामान्य बोतलहरु र पेंच टोपी को आकार मा कुनै सीमा छैन। लगातार क्यापिंग प्रकार TP-TGXG-200 विभिन्न प्याकि line्ग लाइन गति को अनुकूल बनाउँछ।
TP-TGXG-200 स्वचालित बोतल क्यापिंग मेशिन बोतलहरुमा टोपीहरु लाई स्वचालित रूपमा पेंच गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। यो व्यापक रूप मा खाना, औषधि, रासायनिक उद्योगहरु र यति मा लागू गरीन्छ। त्यहाँ आकार, सामाग्री, सामान्य बोतलहरु र पेंच टोपी को आकार मा कुनै सीमा छैन। लगातार क्यापिंग प्रकार TP-TGXG-200 विभिन्न प्याकि line्ग लाइन गति को अनुकूल बनाउँछ। यो मेशिन साँच्चै धेरै उद्देश्यहरु छन्, जो व्यापक रूप मा लागू गरीन्छ र सजीलो अपरेटि छ। परम्परागत आंतरायिक काम प्रकार संग तुलना, TP-TGXG-200 अधिक उच्च दक्षता, कडा दबाइ, र टोपी गर्न को लागी कम हानि को कारण हो।
स्वचालित क्यापिंग मेशिन बोतलहरुमा विभिन्न आकार, आकार को रूप मा राम्रो सामाग्री मा पेंच टोपी संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
A. बोतल आकार
यो 20-120mm व्यास र 60-180mm उचाई संग बोतलों को लागी उपयुक्त छ। तर यो यो दायरा बाहिर पनी उपयुक्त बोतल आकार मा अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
बी बोतल आकार
स्वचालित क्यापिंग मिसिन गोल वर्ग वा जटिल आकार जस्तै विभिन्न आकार मा लागू गर्न सकिन्छ।
सी बोतल र टोपी सामाग्री
जुनसुकै गिलास प्लास्टिक वा धातु, स्वचालित क्यापिंग मेशिनले ती सबैलाई सम्हाल्न सक्छ।
D. पेंच टोपी प्रकार
स्वचालित क्यापिंग मिसिन पम्प, स्प्रे, ड्रप टोपी र यति मा जस्तै पेंच टोपी को सबै प्रकार पेंच गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वचालित क्यापिंग मेशिन सबै प्रकारका उद्योगहरुमा सामेल हुन सक्छ कुनै कुरा यो पाउडर, तरल, ग्रेन्युल पैकिंग लाइन हो, वा यो खाना, औषधि, रसायन विज्ञान वा कुनै अन्य उद्योग हो। जहाँ पेंच टोपी छ, त्यहाँ स्वचालित क्यापिंग मिसिन संग काम गर्न को लागी छ।
निर्माण र काम गर्ने प्रक्रिया
यो क्यापिंग मिसिन र टोपी फीडर को हुन्छ।
१ क्याप फिडर
२. क्याप लगाउने
3. बोतल विभाजक
4. क्यापि whe पा whe्ग्रा
5. बोतल clamping बेल्ट
6. बोतल बोक्ने बेल्ट
अनुगमन काम गर्ने प्रक्रिया हो
Bottles व्यापक रूप बाट बोतलहरु र विभिन्न आकार र सामाग्री को टोपी मा प्रयोग गरीन्छ।
■ पीएलसी र टच स्क्रीन नियन्त्रण, संचालित गर्न सजिलो।
■ सजिलो संचालन र सजिलो समायोजन, धेरै धेरै मानव स्रोत साथै समय लागत बचत गर्नुहोस्।
■ उच्च र समायोज्य गति, जो पैकिंग लाइन को सबै प्रकार को लागी उपयुक्त छ।
Performance स्थिर प्रदर्शन र उच्च सटीक।
■ एक बटन सुरु समारोह धेरै सुविधा को बारे मा ल्याउँछ।
Design विस्तृत डिजाइन मेशिन अधिक humanized र बुद्धिमान बनाउँछ।
Machine मेशिन, उच्च स्तर को डिजाइन र उपस्थिति को दृष्टिकोण मा राम्रो अनुपात।
■ मिसिन शरीर SUS 304 बाट बनेको छ, जीएमपी मानक पूरा गर्नुहोस्।
Bottle बोतल र lids संग सबै सम्पर्क भागहरु खाना को लागी सामग्री सुरक्षा बाट बनेको छ।
Display डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन फरक बोतल को आकार देखाउन को लागी, जो बोतल (विकल्प) परिवर्तन गर्न को लागी सुविधाजनक हुनेछ।
■ Optronic सेन्सर बोतलहरु जो त्रुटि क्याप्ड (विकल्प) हटाउन को लागी।
■ स्वचालित रूपमा ढक्कन मा फीड गर्न लिफ्टिंग उपकरण।
■ ढक्कन खस्ने भाग त्रुटि lids टाढा हटाउन सक्नुहुन्छ (हावा उडाउने र तौल मापन गरेर)।
L बेल्ट ढक्कन थिच्ने झुकाव छ, त्यसैले यो सही ठाउँ मा ढक्कन समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि थिच्नुहोस्।
टोपी को दुई पक्षहरु मा फरक केन्द्र ब्यालेन्स को सिद्धान्त को उपयोग गर्नुहोस्, मात्र सही दिशा टोपी माथि सार्न सकिन्छ। गलत दिशा मा टोपी स्वतः तल झर्नेछ।
कन्वेयर शीर्ष मा टोपी ल्याए पछि, ब्लोअर टोपी ट्र्याक मा टोपी उडाउँछ।
त्रुटि lids सेन्सर सजिलै उल्टो lids पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। स्वचालित त्रुटि टोपी हटाउने र बोतल सेन्सर, राम्रो क्यापिंग प्रभाव पुग्न
बोतल विभाजक एक अर्को बाट बोतल को स्थिति मा बोतलों को गति को समायोजन गरेर अलग हुनेछ। गोल बोतल सामान्यतया एक विभाजक चाहिन्छ, र वर्ग बोतलहरु दुई विपरीत विभाजक चाहिन्छ।
क्याप अभाव पत्ता लगाउने उपकरण नियन्त्रण टोपी फीडर चलिरहेको छ र स्वचालित रूपमा रोक्न। त्यहाँ क्याप ट्र्याक को दुई छेउ मा दुई सेन्सर छन्, एक ट्र्याक क्याप्स भरिएको छ कि छैन जाँच गर्न को लागी, अर्को ट्र्याक खाली छ कि छैन जाँच गर्न।
बोतल कन्वेयर र टोपी फीडर को अधिकतम गति १०० बीपीएम सम्म पुग्न सक्छ, जो विभिन्न पैकिंग लाइन को अनुरूप मेशिन उच्च गति ल्याउँछ।
पा pairs्ग्रा को तीन जोडी छिटो बन्द टोपी। जोडी को प्रत्येक विशिष्ट प्रकार्य छ। पहिलो जोडी उल्टो घुमाउन गाह्रो राख्न टोपी यसको सही स्थिति मा हुन सक्छ। तर उनीहरु टोपी तल घुमाउन को लागी एक उपयुक्त स्थिति मा पुग्न को लागी दोस्रो जोडी पाels्ग्रा संग छिटो जब टोपी सामान्य छ बनाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो जोडी थोरै टोपी टोपी समायोजित, त्यसैले तिनीहरूको गति सबै पाels्ग्राहरु बीच ढिलो छ।
अन्य आपूर्तिकर्ताहरु बाट हात पा wheel्ग्रा समायोजन संग तुलना, एक बटन उठाउन वा पूरै क्यापिंग उपकरण कम गर्न को लागी धेरै सुविधाजनक छ।
चार स्विच बायाँ बाट दायाँ बाट बोतल कन्वेयर, बोतल दबाना, टोपी चढाई र बोतल विभाजन को गति समायोजित गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। डायल सजीलै प्याकेज को प्रत्येक प्रकार को लागी उपयुक्त गति सम्म पुग्न अपरेटर लाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ।
हात पाels्ग्रा सजीलै दुई बोतल दबाना बेल्ट को बीच दूरी परिवर्तन गर्न। त्यहाँ clamping बेल्ट को दुई छेउ मा दुई पाels्ग्रा छन्। डायल बोल्ने आकार परिवर्तन गर्दा सही स्थिति सही गर्न को लागी अपरेटर नेतृत्व गर्दछ।
क्यापिंग पाels्ग्रा र टोपी बीच दूरी समायोजित गर्न स्विच। टाढाको नजिक, टोपी कडा हुनेछ। डायल अपरेटर एक सबैभन्दा उपयुक्त दूरी सुविधाजनक खोज्न मद्दत गर्दछ।
पीएलसी र सरल सञ्चालन कार्यक्रम संग टच स्क्रीन नियन्त्रण, काम सजिलो र अधिक कुशल बनाउँछ।
आपतकालीन बटन तुरुन्तै पल मा एक पटक मेशिन रोक्न, जो अपरेटर सुरक्षित रहन्छ।
TP-TGXG-200 बोतल क्यापिंग मिसिन
-122-120mm (आवश्यकता अनुसार अनुकूलित)
60-280mm (आवश्यकता अनुसार अनुकूलित)
220V/50-60Hz (वा अनुकूलित)
एसएस 304 फ्रेम
प्याकि line लाइन
स्वचालित क्यापिंग मेशिन भर्न मेसिन र लेबलिंग मिसिन एक प्याकिंग लाइन बनाउन को लागी काम गर्न सक्छ।
ए बोतल unscrambler+बरमा फिलर+स्वचालित क्यापिंग मिसिन+पन्नी सील मिसिन।
बी बोतल unscrambler+बरमा फिलर+स्वचालित क्यापिंग मिसिन+पन्नी सील मिसिन+लेबलिंग मिसिन
ढुवानी र प्याकेजि्ग
बक्स मा सामानहरु
Manual निर्देशन पुस्तिका
■ विद्युत आरेख र जोड्ने चित्र
Operation सुरक्षा सञ्चालन गाइड
Wearing लगाउने भागहरु को एक सेट
■ रखरखाव उपकरण
■ विन्यास सूची (मूल, मोडेल, चश्मा, मूल्य)
स्वचालित क्यापिंग मिसिन को समायोजन
1. टोपी लिफ्ट र टोपी राख्ने प्रणाली को स्थापना।
(१) टोपी व्यवस्था र पत्ता लगाउने सेन्सर को स्थापना।
टोपी लिफ्ट र राख्ने प्रणाली ढुवानी गर्नु भन्दा पहिले अलग गरीएको छ, कृपया क्याप व्यवस्था र क्यापिंग मिसिन मा प्रणाली राख्ने मिसिन चलाउनु भन्दा पहिले स्थापित गर्नुहोस्। कृपया निम्न तस्बिरहरुमा देखाइएको अनुसार प्रणाली जडान गर्नुहोस्:
अभाव टोपी निरीक्षण सेन्सर (मिसिन स्टप)
a टोपी राख्ने ट्र्याक र माउन्ट पेंच संग र्‍याम्प जडान गर्नुहोस्।
ख नियन्त्रण प्यानल मा दायाँ छेउमा प्लग संग मोटर तार जडान गर्नुहोस्।
ग सेन्सर एम्पलीफायर १ को साथ पूर्ण टोपी निरीक्षण सेन्सर जडान गर्नुहोस्।
घ सेन्सर एम्पलीफायर २ संग कमी टोपी निरीक्षण सेन्सर जडान गर्नुहोस्।
टोपी चढ्ने चेन को कोण समायोजित गर्नुहोस्: टोपी चढाई चेन को कोण ढुवानी अघि तपाइँ द्वारा प्रदान गरीएको नमूना टोपी अनुसार समायोजित गरीएको छ। यदि यो टोपी को निर्दिष्टीकरण परिवर्तन गर्न को लागी आवश्यक छ (मात्र आकार परिवर्तन, टोपी को प्रकार अपरिवर्तित), कृपया समायोजन पेंच द्वारा टोपी चढाई चेन को कोण समायोजन गर्नुहोस् जब सम्म चेन मात्र क्याप्स जो माथिल्लो छेउ संग चेन मा झुकाउन सक्छ। । निम्नानुसार संकेत:
राज्य A मा टोपी सही दिशा हो जब टोपी आरोहण चेन टोपी ल्याउने।
राज्य B मा टोपी स्वचालित रूपमा ट्यांक मा छोडिन्छ यदि चेन एक उचित कोण मा छ।
(२) टोपी छोड्ने प्रणाली समायोजन (chute)
Chute र ठाउँ छोड्ने को कोण पहिले नै नमूना को अनुसार प्रदान गरीएको छ। सामान्यतया यदि त्यहाँ बोतल वा टोपी को कुनै अन्य नयाँ विनिर्देशन छ, सेटिंग समायोजित गर्न को लागी आवश्यक छैन। र यदि त्यहाँ बोतल वा टोपी को १ स्पेसिफिकेशन भन्दा बढी विशिष्टताहरु छन्, ग्राहक अनुबंध वा यसको संलग्नक मा आइटम सूची कारखाना सुनिश्चित गर्न को लागी थप परिमार्जन को लागी पर्याप्त ठाउँ छोड्नु पर्छ। समायोजन को विधि निम्नानुसार छ:
टोपी छोड्ने प्रणाली को उचाई समायोजन गर्नुहोस्: कृपया ह्यान्डल व्हील १ घुमाउनु अघि माउन्टि screw स्क्रू खोल्नुहोस्।
समायोजन पेंच chute को ठाउँ को उचाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
ह्यान्डल व्हील २ (दुई पक्षमा) chute को ठाउँ को चौडाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
(३) टोपी थिच्ने भाग समायोजन
टोपीले बोतलको मुखलाई चुट बाट स्वचालित रूपमा छोप्नेछ जब बोतल टोपी थिच्ने भाग को क्षेत्र मा खुवाइन्छ। टोपी थिच्ने भाग पनि बोतल र टोपी को उचाई को कारण समायोजित गर्न सकिन्छ। यदि टोपी मा दबाब उपयुक्त छैन यो क्यापिंग प्रदर्शन लाई प्रभावित गर्दछ। यदि टोपी प्रेस भाग को स्थिति धेरै उच्च छ, दबाने प्रदर्शन प्रभावित हुनेछ। र यदि स्थिति धेरै कम छ, टोपी वा बोतल क्षतिग्रस्त हुनेछ। सामान्यतया टोपी थिच्ने भाग को उचाई ढुवानी अघि समायोजित गरीएको छ। यदि प्रयोगकर्ता उचाइ समायोजन गर्न आवश्यक छ, समायोजन को विधि निम्न अनुसार छ:
टोपी थिच्ने भाग को उचाई समायोजन गर्नु अघि माउन्टि screw स्क्रू छोड्नुहोस्।
त्यहाँ सानो टोपी फिट गर्न को लागी मेशिन संग अर्को टोपी प्रेस भाग हो, परिवर्तन को तरीका यो भिडियो मा देखाइएको छ।
(४)। चुप मा टोपी उडाउन हावा को दबाव समायोजन।
२. समग्र रूपमा मुख्य भागहरु को उचाई समायोजन।
बोतल फिक्स संरचना, गम-लोचदार स्पिन व्हील, टोपी थिच्ने भाग जस्तै मुख्य भागहरु को उचाई मिसिन लिफ्ट द्वारा एक सम्पूर्ण रूपमा समायोजित गर्न सकिन्छ। मेशिन लिफ्ट को नियन्त्रण बटन नियन्त्रण प्यानल को दाहिने छेउमा छ। प्रयोगकर्ता मेशिन लिफ्ट सुरु गर्नु अघि दुई समर्थन स्तम्भ मा माउन्टि screw स्क्रू छोड्नु पर्छ।
ø को अर्थ तल र ø को अर्थ हो। सुनिश्चित गर्न को लागी स्पिन पाels्ग्रा को स्थिति टोपी संग मेल खान्छ। कृपया लिफ्ट पावर बन्द गर्नुहोस् र समायोजन पछि माउन्टि screw स्क्रू जकराउनुहोस्।
टिप्पणी: कृपया लिफ्ट स्विच (हरियो) सही स्थिति प्राप्त नभएसम्म सबै समय थिच्नुहोस्। लिफ्ट को गति धेरै बिस्तारै छ, कृपया धैर्य को लागी प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
3. गम-लोचदार स्पिन व्हील (स्पिन व्हील को तीन जोडी) समायोजित गर्नुहोस्
स्पिन व्हील को उचाई मिसिन लिफ्ट द्वारा समायोजित गरीएको छ।
स्पिन व्हील को जोडी को चौडाई टोपी को व्यास अनुसार समायोजित गरीएको छ।
सामान्यतया पा wheel्ग्रा को एक जोडी को बीच को दूरी टोपी को व्यास को तुलना मा 2-3mm कम छ। अपरेटर ह्यान्डल व्हील बी द्वारा स्पिन व्हील को चौडाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ (प्रत्येक ह्यान्डल पा wheel्ग्रा सापेक्ष स्पिन व्हील समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ)।
कृपया ह्यान्डल व्हील बी समायोजन भन्दा पहिले माउन्टिंग स्क्रू छोड्नुहोस्।
4. बोतल फिक्स संरचना समायोजन।
बोतल को फिक्स स्थिति फिक्स संरचना र लि link्क अक्ष को स्थिति समायोजन गरेर समायोजित गर्न सकिन्छ। यदि फिक्स स्थिति बोतल मा धेरै कम छ, बोतल सजिलै संग खुवाउने वा क्यापिंग को लागी बिछ्याउन को लागी। यसको विपरीत यदि फिक्स स्थिति बोतल मा धेरै उच्च छ, यो स्पिन पाels्ग्रा को उचित काम बाधा हुनेछ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कन्वेयर र बोतल फिक्स संरचनाहरु को centerline समायोजन पछि एकै लाइन मा छन्।
बोतल फिक्स बेल्ट को बीच दूरी समायोजन गर्न ह्यान्डल व्हील ए (२ हात सँगै ह्यान्डल घुमाउन को लागी) टर्निंग। तेसैले संरचना राम्रो संग बोतल को प्रक्रिया को समयमा ठीक गर्न सक्छ।
बोतल फिक्स बेल्ट को उचाई सामान्यतया मिसिन लिफ्ट द्वारा समायोजित गरीन्छ।
(सावधानी: अपरेटर4लिंक शाफ्ट मा माउन्ट स्क्रू ढीला पछि एक माइक्रो-स्कोप मा बोतल फिक्स बेल्ट को उचाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।)
यदि अपरेटर एक ठूलो दायरा मा हल फिक्स बेल्ट को जरूरत छ, कृपया पट्टा १ र पेंच २ सँगै बेल्ट को स्थिति समायोजन गर्नुहोस्, र यदि अपरेटर को एक सानो दायरा मा बेल्ट को उचाई समायोजन को जरूरत छ, कृपया मात्र ढीला पेंच १, र समायोजन घुमाउरो ।
5. बोतल ठाउँ समायोजन व्हील र रेलिंग समायोजन।
बोतलको स्पेसिफिकेसन बदल्दा अपरेटरले बोतल स्पेस एडजस्टिंग व्हील र रेलिंग को स्थिति परिवर्तन गर्नु पर्छ। स्पेस एडजस्ट गर्ने पा wheel्ग्रा र रेलिंग बिचको ठाउँ बोतलको व्यास भन्दा २-३ मिमी कम हुनु पर्छ। कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कन्वेयर र बोतल फिक्स संरचनाहरु को centerline समायोजन पछि एकै लाइन मा छन्।
समायोजन पेंच ढीला बोतल ठाउँ समायोजन व्हील को स्थिति समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
लूज समायोजन ह्यान्डल कन्वेयर को दुबै छेउमा रेलिंग को चौडाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो: पाउडर भर्न मेसिन
क्यापिंगको साथ स्वचालित पाउडर भरिने मेसिन